Home Arimaha Bulshada Samrat Prithviraj: 3 sabab oo keenay guul darrada filimkii la sugayay ee...
Filimka lagu magacaabo ‘Samrat Prithviraj’ oo ay sameeyeen Manushi Chillar iyo atooraha caanka ah ee Akshay Kumar, ayaa dhawaan la sii daayay. Laakiin filimkan sidii laga filayay ma noqonin. Sida ay sheegayaan khubarada, filimkan waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah kuwii guul darrada ugu xun la kulmay sanadkan.
Inkastoo aad loo xiisaynayay ka hor soo bixitaankiisa, haddana ma uusan noqonin mid loo riyaaqay, dhaqaale fiicanna ma uusan soo xareynin.
Akshay Kumar ayaa in muddo ah soo waday filimkan Samrat Prithviraj oo ay soo saartay shirkadda Yashraj Films, hadalhayntiisuna waxay maalmihii lasoo dhaafay qabsatay warbaahinta iyo baraha bulshada.
Inta uusan shaashadaha kasoo muuqanin filimkan ayuu dhaliyay muran xoog leh oo ku saabsanaa dhowr arrimood. Isla sababahaas ayaana loo aanaynayaa inuu u guul darraystay.
Boqor lagu magacaabo Prithviraj
Sababta ugu horraysa waa in filimkan lagu dhaliilay inuu qayb ka yahay boqor lagu magacaabo Prithviraj. Markii ugu dambaysay, iyadoo la fulinayo dalab ka yimid shirkadda Karni Sena, ayaa magaca filimka loo baddalay Samrat Prithviraj.
Boqorka uu filimkan ku saabsan yahay, Prithviraj Chauhan, ama Rai Pithora, waxa uu ka mid ahaa boqorradii ugu caansanaa ee Hinduuga.
Isagoo yar ayuu taajka boqortooyada la wareegay 1177 CE, kaddib markii uu dhaxlay
Soo bixitaanka filimka ayaa kusoo aadday xilli Hindiya iyo meelo kale ay ka socdaan muranno la xiriira Islaam nacaybka. Dadka Hinduuga ah ee waddankaas ayaa lagu eedeeyay inay Muslimiinta laga tirada badan yahay faquuqeen.
Sababta labaad ee filimka u horseedday hoos u dhaca ayaa lagu tilmaamay in Akshay Kumar oo ku jilaya doorka boqor Prithviraj uu dad badan uga careysiiyay xayeysiimo xad dhaaf ah, isagoo muddooyinkii lasoo dhaafay baraha bulshada looga jeedinayay dhaliilo ku aaddan xayeysiimihiisa badan.
Munaasabado aad u badan ayaa loo sameeyay si sare loogu qaado filimkan, oo uu daawasho badan u helo.
Waxyaabaha lagu xayeysiinayay waxaa ka mid ahaa kulamo lala yeeshay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Madaxa maamulka gobolka Uttar Pradesh, oo lagu magacaabo Yogi Adityanath.
Intaas keliya kuma ekeyn.
Filimkan ayay dowladdu ka dhaaftay canshuuraha. Waxaase muuqata in dadaalkaas badnaa uusan u miro dhalin sidii loo qorsheeyay.
Atoore 56 jir ah oo jilay door 26 jir ah
Sababta saddexaad ee uu filimkan hoos u dhaca wayn ula kulmay ayaa lagu sheegay inay ahayd khalad lagu sameeyay dhinaca jilitaanka.
Akshay Kumar oo ah atoore ay da’diisu tahay 56 sano ayaa qayb ka mid ah filimka ku jilay wiil dhallinyaro ah oo 26 jir ah.
Ramachandran Srinivasan oo ah wariye rug caddaa ah kana faallooda arrimaha filimada ayaa isagoo qodobkan sharraxaya yiri: “Dadku hadda wax walba way fahmayaan. axaa jiray waqti atooreyaasha Jitendra iyo Dharmendra loo aqbali jiray inay yihiin arday wax ka barta Jaamacadda.
“Inkastoo Aamir uu u muuqdo arday Jaamacadeed, maalmahan dadka wax daawada waxay rabaan in shaleemooyinka loogu soo bandhigo waxyaabo dhab u eg. Haddii uu atoore 56 jir ah jilo door 26 jir ah, waa hubaal inay dadka ku noqonayso wax layaab leh.”
“Ashaky waxa uu jilista filimada kusoo dhex jiray muddo sannado badan ah. Markii uu atooraha noqday waxa uu ahaa 26 jir. Xilligaas waa laga yaabaa inuu doorkaas kusoo bixi lahaa, balse hadda suuragal ma aha. Doorkaas waxaa la rabay inuu u dhiibo atoore da’ yar. Waa inaan aqbalno inaan leenahay doorar kala duwan.”
47 crores kaliya ayuu ku helay shan maalmood
Filimkan ayaa khasaare aad u wayn kula kulmay dhinaca dhaqaalaha. Maalmihii ugu horreysay ayuu soo saaray qiimo aad uga yar kii la saadaalinayay
Girish Wankhede oo ah filim falanqeeye caan ah ayaa BBC-da u sheegay in filimka caanka ah ee Akshay Kumar, ‘Samrat Prithviraj’, uu u muuqdo mid aysan soo dhaweynin daawadeyaasha.
Filimka waxaa la sii daayay 3-dii bishan June. Lacag dhan Rs 10.5 crore oo u dhiganta qiyaastii $1,343,681 oo doolarka Mareykanka ah ayaa kasoo xarootay maalintii koowaad.
Maalintii labaad waxaa kasoo xarooday Rs 12.5 crore. Saddex maalmood gudahood filimkan waxa uu keenay lacag aad u yar oo dhan Rs 39 crore.
Shantii maalmood ee ugu horraysay oo la filayay in uu gaari karo ilaa Rs 250 crore waxa uu keenay Rs 47 crore oo keliya.
Previous articleCarles Puyol Oo Magacaabay 4 Xul Oo Ugu Cad-Cad Ku Guulaysiga Koobka Adduunka
Next articleShiinaha: Boqorkii caanka ahaa ee markii dambe noqday shaqaalaha beeraha